Guddoomiyyaashii Xisbiga UCID ee Gobolada Bariga Somaliland oo Xilalkii laga qaaday | Salaan Media
Guddoomiyyaashii Xisbiga UCID ee Gobolada Bariga Somaliland oo Xilalkii laga qaaday
Hargeysa July 18,2013(SM)-Guddoomiyeyaashii Gobolada Bariga Somaliland ee xisbiga Mucaaridka ah ee UCID ayaa xilalkii laga qaaday ka dib codsi ka yimi taageereyaasha xisbigaas ee Bariga.
Sidaana waxa lagu yiri Qoraal uu soosaaray Xoghayaha guud ee Xisbiga UCID Md Axmed Keyse oo sidan u Qoreyd:
Ujeedo: Wargelin Muhiim ah
Waxa aanu ka helnay codsiyo farabadan xubnaha iyo taageerayaasha Xisbiga Ucid ee seddex gobol ee kala ah Sanaag, Sool, iyo Togdheer. Codsiyadaasi oo lagu doonaayay ama lagu dalbanaayay in mas’uuliyiinta xisbiga ee heer gobol iyo heer degmaba ay ku yimaadaan nidaam doorasho si looga baxo nidaamkii magacaabista ee baal marsanayd siyaasadda xisbiga ee ah ‘in xisbiga dhexdiisa ay ka jirto lagana hirgeliyo ku dhaqanka nidaamka dimuqraadiyadda’.
Haddaba, markii uu xisbigu arrintaasi wada tashi dheer ka sameeyay, tixgelin gaar ahna la siiiyay codsiga xubnaha, xisbiyiinta iyo taageerayaasha xisbiga Ucid ee goboladaasi, waxa la go’aansaday oo la isla qaatay arrimahan soo socda:-
1. In la nasiyo guddoomiyayaasha goboladda iyo ku-xigeenadooda ee xisbiga Ucid ee seddexdaasi gobol.
2. In sidoo kale iyana la nasiyay guddoomiyayaasha degmooyinka seddexdaasi gobol.
3. In lagu sameeyay shaqo joojin xoghayayaasha goboladda iyo degmooyinka ee seddexdaas gobol kuwaas oo iyana ku iman doona nidaam doorasho.
4. In sidaas si le’eg la baneeyay jagooyinkii ahaa guddoomiyayaasha garabyadda haweenka iyo dhallinyaradda ee seddexda gobol ee kor ku xusan laga bilaabo maanta.
5. In fariintii iyo amarkii ka bilaabmaayay December 2012 ee ahaa in aan la furi karin xafiis inta dub u qiimeyn lagu sameynaayo xafiisyada xisbiga ee goboladda iyo degmooyinka uu weli halkiisii yahay. Marnabana xisbigu mas’uul kama noqon doono xafiis la iska kireeyay amar iyo idin la’aan.
Sidaasi darteed, mansabyadaasi iyo xilkaasi aanu soo sheegnay ee seddexdaasi gobol waxa ay ku iman doona ama lagu soo buuxin karaa nidaam doorasho marka ay xubnaha xisbiga iyo taageerayaashoodu qabsadaan shirarkooda lagu wada in ay dhacaan ama qabsoomaan bisha barakaysan ee Ramadaan ka dib. Degmooyinka uu xisbiga ku leeyahay gole degaan iyaga ayaa yeelan doona masuuliyadda abaabulka shirarkaasi. Degmooyinka aanu xisbigu ku lahayn xubno gole degaan waxa xisbigu u soo diri doona guddi heer qaran sida la soo codsaday waa hadii ay ku adkaato in dhexdooda ka dhameystaan. Mas’uuliyiintii hore ee xilalkii hore uga hayay xisbiga ee uu hungurigu ama damacu ka hayo in ay xilal denbe ka qabtaan xisbiga waxa ay xaq u leeyihiin in ay isa soo sharaxaan xaqna waxa ay u leeyihiin in la doorto iyo in ay wax doortaan. Balse marnaba suurtogal noqon meyso in qof shaqaale dowladeed ah uu xil ka qabto xisbiga Ucid ee heer gobol iyo heer degmo toona taas oo iminkaba ka dhacday degmooyinka qaarkood oo aan hadda laga soo ogaanay gadaal.